Sirdoonka Maraykanka Oo soo Saaray Warbiixin ku Aadan Dilkii Wariye Jamal Khashogi. – Awdalmedia
Waxa la daabacay qaybo ka mid ah warbixin ay soo saareen sirdoonka Maraykanka oo ka waramaysa dilkii wariyihii Jamaal Khashoji, waxaana warbixinta lagu sheegay in dhaxalsugaha Sucuudiga Bin Salmaan inuu amray hawlgalka lagu soo qabanayay ama lagu khaarajinayay suxufiga u dhashay dalka Boqortooyada Sacuudiga.
“Waxaan ogaanay in dhaxalsugaha Boqortooyada MBS uu amray hawlgalka ka dhacay Istanbul, kaasoo ujeedadiisu ahayd in la qabto ama la dilo Suxufiga Jamaal Khaashoqji”sidanna waxa lagu qoray hordhaca warbixinta.
Sidoo kale waxa qayb kale oo hordhaca warbixintan lagu yiri “Waxan aan qiimaynta xogtan ku salaynay awooda buuxda ee Bin Salmaan gacantiisa ku jirta oo ka dhigtay midka go’aanka ugu denbeeya ee Boqortooyada iska leh iyo inay hawlgalkaasi Istanbul ka qayb qaateen la taliyayaal gaar ah iyo xubno ka agdhaw Bin Salmaan iyo sidoo kale Bin Salmaan oo hore u taageeray ama ku goodiyay in awood loo isticmaali doono dadka kasoo horjeeda Boqortooyada ee ku dhaqan dalka dibadiisa oo uu ku jiro.
Qayb kale oo Warbintan ka mid ah ayaa lagu iftiimiyay in MBS yahay ninka ugu awooda badan ee Sacuudiga; “tan iyo 2017kii dhaxalsuguhu waa ninka kaliya eegacan bir ah ku haya maamulka laamaha amniga iyo sirdoonka ee Boqortooyada waxaana ay tani ka dhigaysaa Bin Salmaan in aanay saraakiisha sacuudigu fulin karin waxaanu ogayn”.
Tusaale ahaan koox ka kooban 15 qof oo Sacuudi ah ayaa soo gaartay Istanbul Oktober 2018kii oo ahayn waqtigii la dilay Khashoji, kooxdana waxa ku jiray xubno ka tirsan xarunta barashada saxaafada ee Sacuudiga ee loo yaqaano Center for Studies and Media Affairs (CSMARC) waxaana hogaaminayay la taliye aad ugu dhaw Bin Salmaan iyo todobo xubnood oo ka tirsan ilaalada gaarka ah ee Bin Salmaan.
Sidoo kale warbixintan ayaa lagu yiri waqti la dilay Jamaal khashooji, “Dhaxalsugaha aad ayay uga baqayeen kooxda dilka fulisay, waxana ay ogaayeen in hadii ay ku fashilmaan hawlgalka dilka ay cawaaqib xumo kala kulmi-doonaan”
Sikastaba ha ahaatee warbixintan ayaa waxa ciyiwaan looga dhigay kaalintii ay dawlada Sacuudiga ku lahayd dilkii Jamaal Khaashooji, waxaana lagu wadaa in maalinta jimcaha ah bulshada.
Halkan ka Akhriso Hordhaca Warbixinta;
Golaha Guurtida Somaliland Oo Dood Ka Yeeshay Xeerka Dekedaha Somaliland.